5 “Panguva ino unozvicheka-cheka,+ haiwa iwe guta rapindwa nechisimba; iye akatikomba.+ Vacharova mutongi waIsraeri padama netsvimbo.+ 2 “Asi iwe, haiwa Bhetrehema Efrata,+ muduku kwazvo zvokusagona kuva pakati pezviuru zvaJudha,+ kwauri+ kuchabuda munhu achava mutongi pakati paIsraeri nokuda kwangu,+ iye akavamba panguva yokutangatanga, pamazuva enguva isingagumi.+ 3 “Naizvozvo achavasiya+ kusvikira panguva apo iye anosununguka achasununguka.+ Dzimwe hama dzake dzose dzichadzoka kuvanakomana vaIsraeri. 4 “Achamira, ofudza makwai nesimba raJehovha,+ noukuru hwezita raJehovha Mwari wake.+ Vacharamba vachigara vakachengeteka,+ nokuti zvino iye achava mukuru kusvikira kumigumo yenyika.+ 5 Uyu achava rugare.+ Asi muAsiriya, paanouya munyika yedu, uye paanotsika shongwe dzedu dzokugara,+ tichamumutsira vafudzi vanomwe, chokwadi tichamumutsira machinda masere pakati pevanhu kuti varwe naye. 6 Vachafudza nyika yeAsiriya nebakatwa,+ nenyika yaNimrodhi+ pamasuo ayo. Iye achatinunura pamuAsiriya,+ paanopinda munyika yedu nepaanotsika munharaunda yedu. 7 “Vachasara vaJakobho+ vachava sedova rinobva kuna Jehovha pakati pemarudzi mazhinji,+ vachava semvura zhinji inonaya pamusoro pezvinomera,+ izvo zvisingatarisiri kumunhu kana kumirira vanakomana vomunhu wepanyika.+ 8 Vachasara vaJakobho vachava pakati pemamwe marudzi, pakati pemarudzi mazhinji, seshumba iri pakati pemhuka dzomusango, somwana weshumba ava nezenze ari pakati pemapoka emakwai, uyo anoti kana akapfuura nepakati pawo, anotsika-tsika nokubvambura-bvambura;+ uye pasina mununuri. 9 Ruoko rwenyu ruchava pamusoro pemhandu dzenyu,+ uye vavengi venyu vose vachaparadzwa.”+ 10 “Zvino nezuva iroro,” ndizvo zvinotaura Jehovha, “ndichaparadza mabhiza ako pakati pako ndoparadza ngoro dzako.+ 11 Ndichaparadza maguta enyika yako ndoputsa nzvimbo dzako dzakavakirirwa.+ 12 Ndichaparadza uroyi muruoko rwako, uye hapana vanoita zvemashiripiti vauchazoramba uinavo.+ 13 Ndichaparadza mifananidzo yako yakavezwa neshongwe dzako dziri pakati pako, uye hauzokotamirizve basa remaoko ako.+ 14 Ndichadzura matanda ako matsvene+ pakati pako, ndotsakatisa maguta ako. 15 Ndichatsiva marudzi asina kuteerera ndakatsamwa uye ndakashatirwa.”+